Warbixin: Barcelona Oo U Furan Inay Dalab Ka Gudbiso 18 Ciyaaryahan Xagaagan
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWarbixin: Barcelona oo u furan inay dalab ka gudbiso 18 ciyaaryahan xagaagan
June 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay u furan tahay inay dalabyo u dirto ilaa 18 ciyaartoy xagaagan taasoo qeyb ka ah tallaabooyinka dhimista.
Kooxda reer Catalonia ayaa ku jirta dhibaato dhaqaale oo daran iyaga oo doonaya in ay keenaan deyn ku dhow 862 milyan oo euro ah oo ay gacanta ku hayaan.
Barca ayaa diirada saareysa saxiixyada bilaashka ah waxayna durbaba keensatay Eric Garcia iyo Sergio Aguero oo ka yimid kooxda Manchester City.
Si kastaba ha noqotee, heshiis cusub oo uu u saxiixay xiddigga Lionel Messi ayaa sidoo kale soo socda, kooxda La Liga ayaa baahi weyn u qabta xoogaa lacag ah oo soo gasho
Sida laga soo xigtay Goal , halista xaaladdu waxay ka dhigan tahay in Barca ay aqbashay in dhowr ciyaartoy oo kooxda koowaad ah ay dhaqaaqi doonaan bilaha soo socda.
Waxaa la sheegay in Gerard Pique , Sergio Busquets , Jordi Alba , Clement Lenglet , Antoine Griezmann , Philippe Coutinho , Miralem Pjanic iyo Samuel Umtiti ay yihiin magacyada ugu caansan ee la iibinayo.
Junior Firpo , Martin Braithwaite iyo Matheus Fernandes ayaa iyagana la filayaa inay diyaar u yihiin liiska iibinta ee kooxda.
xidigaha, Messi, Ronald Araujo , Ansu Fati , Pedri iyo Frenkie de Jong ayaa ah ciyaartoyda kaliya ee uu u arko madaxweye Joan Laporta lama taabtaan .